O Guia Do Semalt: I-Criando O Conteúdo Que É Viral
Ukumaketha kwe-intanethi kumayelana nokwabelana kwedatha. Ngenxa yalokho, abantu baqhubeka bexhumana nomunye nomunye futhi babelana ngemininingwane, ngaleyo ndlela umphumela womzwelo wezimpawu uthinta abantu. Abantu bahlanganyela ngentshiseko ngalokho okuthakazelisayo noma okuthinta imizwelo yabo ngendlela ehlukile. Lobudlelwano bungumphumela ongasetshenziswa ngabadayisi ukwenza abantu baqonde into ethile ngendlela ethile.
Kuwebhusayithi noma kumithombo yezokuxhumana, othile angathola ukuthi okuqukethwe kwakho kudingekile ukwabelana. Kusuka kulesi shintshaniso, ulwazi lungasakazeka nokunye ukuze kufinyelele izigidi zabantu laphaya. Ithonya lizuza njengoba likhula ngokwengeziwe, isimo esaziwa ngokuthi i-viral loop. Amalokhi e-Viral ayadingeka kuwo wonke amakhankaso wokumaketha. Basisiza ukuthi siqonde izindlela ezahlukene zokwenza lesi sici futhi sithole imiphumela emihle kakhulu.
Izindlela ezimbalwa ongayenza ngazo loop loop virus zinikezwe ochwepheshe Semalt Services Digital, Andrew Dyhan.
1. Yakha okuqukethwe okuphathekayo
Okuqukethwe kwakho kufanele kufanelane nama-platforms ahlukene enethiwekhi yomphakathi. Njengoba nje uhlela ukwenza okuqukethwe kubonakale kwangempela kumanethiwekhi omphakathi, kufanele kubhekeke kumangqamuzana amaningi. Lokhu kuhlukahluka kwenzeka ngenxa yokuthi izinhlelo ezahlukene zesofthiwe nezisebenzayo zinezimpendulo ezahlukene kanye nobubukeli. Ngenxa yalokho, ungasebenzisa amapulatifomu ajwayelekile njengePinterest ne-Twitter..E-Twitter, kunenani eliphezulu lezinhlamvu ezingu-160.
2. Cupha izinxusa zakho
Sebenzisa abamele ukwenza okuqukethwe bahambe nge-ambassadors. Ukuthola umbukeli wesikhathi esidala ukubona okuqukethwe kwakho kulula kakhulu kunokuthola umuntu omusha ukubona into efanayo. Ngenxa yalokho, le nqubo ingathola abantu abasha ukubona okuqukethwe kwakho kanye nababukeli bakudala. Enye yezindlela eziphumelelayo kakhulu zokufeza lokhu ukuthengisa nge-imeyili. Abantu abakuhlu lwakho lwe-imeyili babeke baklayenti bakho. Lobudlelwane kusho ukuthi ukuzifinyelela kubo kulula kakhulu kunokudala izilaleli ezintsha. Kusuka kulaba bantu ungabangela i-virtual loop nge-Tech SEO ne-Social Media Marketing. Ngokuvamile, abantu banomncintiswano wokuhlinzeka ngesihlinzeko samahhala.
3. Ukunqoba izithiyo futhi uhlanganyele ngokukhululekile
Njengoba uqala i-viral loop ngokushesha, ukwehla kungaba lula nakakhulu. Ababhulogi kufanele babheke izindlela eziningi zokugcina izilaleli zabo zihlanganyele. Ngale ndlela, bangakwazi ukuhlala besondelene nokunikeza ulwazi olunenjongo kumnikazi. Isibonelo, umthengisi wedijithali angafunda emibhalweni ukuthi izilaleli zidinga umdwebo wevidiyo.
Ukudala i-viral loop yokuqukethwe kwakho kungase kube ikhefu ngokusebenzisa isu kumkhankaso wakho we-SEO. Ngenxa yalokho, abantu abaningi basungula futhi bahlanganyela okuqukethwe kwe-intanethi okwenza izinjini zokuhlola zihlole ukwethembeka kwamawebhusayithi abo. Ezimweni eziningi, lezi zingosi ziphezulu, zandisa isikhundla abahlala kuzo kuma-SERP. Le nqubo phakathi kwabanye ingenza okuqukethwe kwakho kuhambe ngegciwane, isu elibalulekile lokuthengisa. Lesi siqondiso singenza iwebhusayithi yakho ithole ithrafikhi ezindaweni eziningi ezihlukahlukene emhlabeni. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bangathola lolu lwazi luwusizo futhi benze okuhle kakhulu kulo.